Ọhụrụ Na Pụrụ Iche Kere
Home > Ngwaahịa > Ọhụrụ Na Pụrụ Iche Kere (Total 24 Ngwaahịa maka Ọhụrụ Na Pụrụ Iche Kere)
Ọhụrụ Na Pụrụ Iche Kere - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
Anyị bụ ndị ọkachamara Ọhụrụ Na Pụrụ Iche Kere manufacturers & suppliers / factory from China. Ebube Ọhụrụ Na Pụrụ Iche Kere na akwa dị elu dịka obere ọnụahịa / ọnụ ala, otu n'ime Ọhụrụ Na Pụrụ Iche Kere na-eduzi ụdị aha si China, ZHEJIANG FIZZ NEW ENERGY CO.,LTD .
Nkwekọrịta dị iche iche Ikpo okwu Ikuku Bluetooth
Tag: Ndị na-ekwu okwu na mbara igwe , Nkwupụta ụda Bluetooth kwadoro , Igwe Nkwuputa Igwe Igwe Igwe Igwe
Igwe okwu Bluetooth a na-arụ ọrụ na batrị nnukwu batrị 1200 Mah, ike ikuku na-enweghị ike, obere oge, free wireless na-ejighị n'aka, Njikọ Bluetooth dị mfe ma dị mfe ma jikọtara ya na ụdị ọrụ ọkpụkpọ Bluetooth ọ bụla, n'agbanyeghị ime ụlọ na...
Ngwurugwu PV Ahịa Pụrụ Iche
Tag: Polycrystalline Solar Energy , Mbadamba PV a haziri ahazi , Mmetụta Uhie Na-adịghị mma
Polycrystalline anyanwụ panels na nnukwu mgbanwe ntọghata na akwa arụmọrụ mmepụta. Polycrystalline anyanwụ ike . Ọdịdị ìhè na-adịghị ike nke na-adịghị ike, nkà na ụzụ pụrụ iche na-eme ka components dị mma, nke siri ike ma na-egbochi snowstorm, dị...
Ọhụrụ Na Pụrụ Iche Kere akwa si China, Direct Zụta si China na-eduga ndị nrụpụta na ọnụahịa ụlọ ọrụ dị ala. Chọta akwa Ọhụrụ Na Pụrụ Iche Kere ngwaahịa na ZHEJIANG FIZZ NEW ENERGY CO.,LTD ma nweta akwa mma Ọhụrụ Na Pụrụ Iche Kere kpọmkwem site na a pụrụ ịtụkwasị obi Chinese Ọhụrụ Na Pụrụ Iche Kere wholesalers & suppliers. Zipu ihe ị chọrọ ịchọrọ & Mee nzaghachi ozugbo.